Soo dejisan Dropbox 87.4.138 – Windows – Vessoft
Nidaamka hawlgalka: Windows, Android
Bogga rasmiga ah: Dropbox
DropBox – software caan ah in ay la shaqeeyaan server baynamutaan kuwaasi. Software ayaa si toos ah badbaadiyay xogta on server fog iyo awood u si ay u helaan in files badbaadi leh awood uu ku geliyaan, xataa dadka isticmaala diiwaan gashanayn. Muujinta ah ee DropBox waa .Wadashaqayntaas toos ah xogta u dhexeeya qalabka kala duwan taasi oo ka xisaabtaada. User ayaa qabsato karaa xawaaraha degsado iyo dajinta oo ku haboon baahida qofka. Sidoo kale DropBox badbaadiyay taariikhda download iyo awood u inuu ka soo kabsado xogta dib marka la tirtiro faylasha la server.
.Wadashaqayntaas Xogta Automatic
Control helaan server daruur xogta
Suurtagalnimada in la helo u soo degsado faylasha in dadka isticmaala aan idman
Soo dejisan Dropbox
Faallo ku saabsan Dropbox
Dropbox Xirfadaha la xiriira
software The for kala iibsiga dhakhso ah files of noocyo kala duwan ama tirada. software wuxuu taageeraa dhaafsiga xogta u dhexeeya qalabka kala duwan iyo kombiyuutarada isku mar.
Filezilla – waa aalad si loo soo dejiyo oo faylasha looga soo dejiyo FTP-server-yada. Softiweerku wuxuu taageeraa howlo badan oo waxtar leh iyo borotokoollo loogu talagalay wareejinta faylka ee aaminka ah ee loogu adeegayo.
Google Backup and Sync – macmiil waxaa loogu talagalay in lagu kaydiyaa oo faylasha lagu daro kaydinta daruuriga Google Drive. Softiweerku wuxuu la yimid set oo ah dalabyo xafiis oo dheeri ah oo ka socda Google.
Tool u fariimaha deg dega ah ee shabakadda Jabber ah. Software ayaa awood u ku xidhiidhiyaa shirarka iyo waafajinta xogta u dhexeeya xisaab badan.
Agabka in la ballaariyo fursadaha lagu jiro shaqada leh webcam a. Barnaamijka waxaa ka mid ah set oo ah saamaynta kala duwan oo kuu ogolaanaya in aad iyagoo aad ku dartid CHAT video.
Freenet – softiweer ay la shaqeyso shabakada ’FreeNet’ ee qarsoon ee qarsoon. Softiweerku wuxuu xaqiijinayaa is-weydaarsiga aaminka ah ee faylalka iyo soo dejinta xogta kala duwan.
Dhammeystirka Amniga Internetka ee Comodo – fayrasku wuxuu leeyahay gambaleel la isku halleyn karo, scanner daruur, kaydinta khadka tooska ah ee internetka, teknoolojiyadda falanqaynta dabeecadda iyo sanduuqyada-sanduuqyada.
FireAlpaca – softiweer waxaa loogu talagalay in la rinjiyo oo la sawiro oo leh astaamo dareen leh iyo qalab badan oo farshaxan.
Tuul arkaan oo la shaqeeya sawiro files. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad codsato saamaynta kala duwan oo aanay files si qaabab loo jecel yahay.